Tartanka finalka Tennis-ka Haweenka Wimbledon oo isugu soo haray Williams iyo Kerber… – Hagaag.com
Tartanka finalka Tennis-ka Haweenka Wimbledon oo isugu soo haray Williams iyo Kerber…
Posted on 13 Luulyo 2018 by Admin in Sports // 0 Comments
Haa, tani waxay noqon doontaa finalka 10aad ee Wimbledon ee Serena Williams. Haa, waa finalkii 30 aad ee tartamada kuwa horyaalka ah. Iyo, si fiican, hubaal, iyada oo si weyn loogu tixgeliyo in aynan aheyn oo keliya tan ugu fiican marxaladan, laakin ay tahay tan ugu fiican mar walba.
Williams ayaa ciyaaraha Tenniska ku soo noqotay kadib markii ay dhashay gabadh, waxay ka maqneyd muddo dheer.
Waxay hadda ka qeyb galeysaa ciyaaraha Tenniska Wimbledon ee London 2018 oo ka mid ah afarta Grand Slam ee ugu weyn tartamada Tenniska, waxay shalay dardartay Julia Goerges oo Jarmal ah kuna jirta kaalinta 13aad ee caalmka, 6-2, 6-4.
Waxay sidoo kale ku dhowdahay in ay qaado koobkeedii 24-aad ee Grand Slam, taas oo la mid noqon doonta rikoodhkii Margaret Court dhigtay oo ah mid aan weli la gaarin abid.
“Dad badan ayaa dhahay, ‘Oh, waa inay timaadaa finalka,'” ayey tiri Williams oo 36-jir ah. “Aniga ahaan waxay ii tahay farxad iyo reyn reyn, sababtoo ah, waad ogtahay, wax ka yar sanad ka hor, waxaan ku dhex jiray waxyaabo kale oo aad u badan.”
Waxay maalinta beri oo sabti ah la kulmi doontaa Angelique Kerber oo Jarmal ah kuna jirta kaalinta 11aad ee adduunka.
“Wax kasta oo dhaca, haddii si daacadnimo kuula hadlo,” ayey tiri Williams, “waa dadaal aan caadi aheyn.”